Nkwupụta ventionlọ Ọrụ Penang na Exhibition na COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Nkwupụta ventionlọ Ọrụ Penang na Exhibition na COVID-19
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa Malaysia • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Safety • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
N'ihe banyere nkwupụta COVID-19 dịka ọrịa zuru ụwa ọnụ nke WHO, Penang Convention & Exhibition Bureau (PCEB) ga-achọ ịnye ndị niile na-ahazi mmemme azụmaahịa ka ha yigharịa ihe omume ha ruo mgbe ọnọdụ a ga-achịkwa.
Site na ikpe 428 akwadoro na Malaysia ka ọ dị ugbu a, anyị ga-ahọrọ ịdebe nchekwa na ahụike nke ọha na eze na ndepụta kachasị mkpa anyị.
Ọ bụrụ na ndị na-ahazi obere azụmaahịa dịka nzukọ ọmụmụ, ọzụzụ, na nzukọ na-aga n'ihu na mmemme ha, anyị na-agba gị ume ịtụle ịkwaga ihe omume gị n'ịntanetị.
Maka ndị njem azụmahịa ọ bụla nọ na Penang ugbu a, ọ bụrụ na ịmalite ịrịa ọrịa na-adịghị mma dịka isi ọwụwa na obere imi, anyị na-adụ gị ọdụ ka a nwalee gị
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọgwụ ndị akọwapụtara maka nyocha COVID-19 bụ Hospitallọ Ọgwụ Penang, palalọ Ọgwụ Kepala Batas, beralọ Ọgwụ Seberang Jaya na Bukit Mertajam Hospital na Penang Hospital bụ naanị ụlọ ọrụ dịpụrụ iche na steeti.
Anyị na-agba ndị na-ahazi ume ka ha gaa n’ihu ịjụ anyị ajụjụ ka ọnọdụ na-amalite. PCEB dị ebe a iji nyere gị aka n'oge oge a na-agba mbọ, anyị nwere obi ike na ị ga-enwe ike itinye ihe omume gị na Penang ozugbo ọnọdụ a kwụsiri ike.
Nchebe gị bụ ihe kacha mkpa anyị, na ihe niile Business Events Penang ụlọ ọrụ na-etinye aka n'ịhụ na njigide nke ntiwapụ nke COVID-19. Oge a bụ oge anyị kwesiri ịnọ jụụ, dịrị n'otu ma rụọ ọrụ ọnụ iji hụ na anyị gbakere n'ọrịa ọjọọ a siri ike maka Penang na Malaysia.